🥇 accounting yezvikwereti chikwereti
Chiyero: 4.9. Nhamba yemasangano: 444
Vhidhiyo yeakaunzi yezvikwereti chikwereti
Raira kuverenga pamusoro pezvikwereti chikwereti
Kiredhiti chikwereti accounting muUSU Software iri mukuteerera zvizere nemitemo yekuverenga, iyo inopatsanura chikwereti, zvinoenderana nenguva yekubhadhara yezvikwereti zvakagamuchirwa, maererano nechibvumirano, mukureba-nguva yekubhadhara chikwereti inodarika mwedzi gumi nemaviri. , uye pfupi-pfupi, apo chikwereti chinofanirwa kubhadharwa nguva isati yapera. Zvakare, kuverengerwa kwechikwereti pazvikwereti zvakagamuchirwa zvakarongedzwa kwete chete nezvikamu zviviri izvi asiwo nevanokweretesa nevanokwereta. Izvi zvinotemerwa nenzvimbo yesangano rakaisa iyi software, iyo inogona kushandiswa nechero bato kuchibvumirano chechikwereti, kunyangwe, kana iwe ukafunga, kuti nyaya yekukurukurirana ndeyezvikwereti zvakagamuchirwa, uye yavo accounting, zvinoreva kuti isu vari kutaura nezve bhizimusi rinochengeta marekodhi ezvikwereti zvakagamuchirwa.
Kudzora pamusoro pechikwereti chazvino pazvikwereti zvakagamuchirwa kunoiswa mudhatabhesi rezvikwereti, uko zvikwereti zvakagamuchirwa zvinoumba nhoroondo yavo, kutanga kubva pazuva rekutumira chikumbiro, kubvumidzwa kwaro kunotevera, uye kuendesa mari kuakaundi yakakodzera, zviitiko zvechikwereti zvichitarisa mazwi uye mari inobhadharwa, kubhadhara makomisheni, uye muzana. Chikwereti chega chega chinotambirwa, chine yakasarudzika 'dossier' mune ino dhatabhesi ine chinzvimbo chakatarwa chinoratidzira mamiriro azvino echikwereti, uye chinzvimbo, ichocho, chinotariswa nemuvara, uyo nevashandisi vechirongwa vanoona kutarisa kuzadzikiswa kwezvisungo. kubhadhara chikwereti ichi. Mamiriro ezvinhu echikwereti pachikwereti chakagamuchirwa ane akati wandei masisitimu, anosanganisira kubhadhara nenguva, kutadza nguva yekubhadhara, kunonoka, kuwedzera kwezvirango, nevamwe. Mushandisi anopatsanura mamiriro maererano nedambudziko ravo, pasina kushandisa nguva kuvhura gwaro rega kuti vazvizive nemamiriro echikwereti.
Iko kumisikidzwa kweakaunzi yechikwereti pazvikwereti zvakagamuchirwa zvinobudirira kuzadzisa rimwe remabasa ayo akakosha - inochengetedza nguva yevashandi uye inoona zviratidzo zvekuita kuti ive nekukurumidza kuongorora kwemaitiro ebasa, izvo zvinoita kuti zvikwanise kuwedzera kushanda zvakanaka kwemaitiro uye nevashandi kugadzirwa, iyo kubatsirwa kwebhizinesi, nepo zvichirongeka kuronga ruzivo pachikwereti pazvikwereti zvakagamuchirwa nekugadzirisa maitiro eakaunzi yaro. Kuisirwa kwekugadziriswa kweakaunzi yechikwereti pazvikwereti zvakagamuchirwa kunoitwa nemusimudziri, mushure meizvozvo mhedzisiro pfupi yezvose kugona kwesoftware inopihwa, ayo asiri mashoma, izvo zvinoita kuti zvive nyore kusunungura vashandi kubva pakuita mabasa mazhinji ezuva nezuva. , kunyanya kubva mukutora chikamu mukuverenga uye kuverenga. Nekudaro, aya ndiwo marongero anoita otomatiki accounting account anoitisa maitirwo aya zvakasununguka, zvichipa iro bhizinesi nekururamisa uye nekukurumidza kwekugadzirisa iyo data kuti inyorwe.
Zvakare, vashandi havachabatanidzwe mukuumbwa kwemamwe magwaro. Iko kumisikidzwa kweakaunzi yechikwereti pazvikwereti zvakagamuchirwa kunovaita vakazvimiririra, vachishanda zvakasununguka nedata rinowanikwa muhurongwa uye bhangi remafomu akavakirwa mariri, rakagadzirirwa zvakanyanya kuita aya mabasa. Zvinyorwa zvinogadziriswa zvoga zvinowirirana nezvose zvinodiwa, zvinosangana nechikumbiro uye chinangwa, izvi zvinoongororwa neruzivo uye remberi base, zvakare yakavakirwa muhurongwa hwekuverenga, panounganidzwa zvese zvinopihwa, zvirevo, maitiro, uye zviyero, kusanganisira kugadzirirwa kwemashoko emari. Nheyo yacho inoita ongororo yenguva dzose yekubuda kweyekushandurwa nyowani kune aripo magwaro emitemo, ayo anotarisa nekugadzirisa marongero muhurongwa pachawo kuwana mhedzisiro-inoenderana nekuverenga nekugadzirira magwaro. Iko kuwanikwa kweruzivo uye remberi remberi kunopawo mamiriro ekuverenga, ayo anotendera otomatiki kuverenga sezvo imwe neimwe oparesheni inogamuchira kukosha kukosha kutarisisa zviyero zvakamisikidzwa muindasitiri uye zvinoratidzwa mudenga.
Basa revashandisi rinosanganisira kushanda kumwe chete - iyo inowedzerwa nguva kuchirongwa chekuverenga kwavo kwakawanikwa vachiita mabasa ebasa mukati mehunyanzvi. Pahwaro hwavo, iyo otomatiki accounting system inoitisa iko kuverenga nekukasira kwezviratidziro zvazvino zvine chekuita neshanduko yakagamuchirwa, kuvakazve rondedzero yemaitiro azvino, nekudaro, inofarira kukamurwa kwekukurumidza kweruzivo rwekutanga uye rwazvino kubva kuvashandisi, zvichivakurudzira kushingairira kutora chikamu mune yekupinda dhata maitiro nekungoereketa kuverenga mushandisi chidimbu-chiyero muhoro, uchifunga huwandu hwebasa rakanyoreswa mumagetsi ebasa matanda. Panguva imwecheteyo, vashandisi vanoshanda mumafomu emagetsi, ruzivo rwunotumirwa mavari rwunoratidzwa nekunyoresa, iyo munhu wese anotambira pamwe ne password yekudzivirira kupinda muchirongwa kuitira kuchengetedza kuvanzika kweruzivo rwepamutemo, uye nekudaro basa rehunhu hwe data ravo uye nenguva yekuisa kwavo mukati meiyo system.
Pamusoro pehwaro hwezvikwereti, CRM inoiswa seyakagadzwa yevatengi, uko kurongeka kwekudyidzana navo kwakarongeka, nhoroondo yakadzama yevatauri yakarongedzwa kubva panguva yekunyora. Faira rega rega rine rako data, vanobatika, dura rezvinyorwa, mapikicha, uye rondedzero yakadzama yebasa rinoitwa nezuva - mafoni, tsamba, misangano, uye kuburitsa chikwereti. CRM zvakare inochengetera zvese zvinopihwa kune mutengi, zvinyorwa zvetsamba zvakatumirwa, kopi dzemazita ezvitupa, uye pikicha kubva kuwebhu webcam yakasungirirwa.
Kuona kubatana kwekunze, zvemagetsi kutaurirana mabasa mune akati wandei mafomati - Viber, SMS, e-mail, izwi kufona, ayo anoshandiswa kutsigira kutumira uye kuzivisa. Mutengi anoziviswa otomatiki zvichienderana nemazuva ekukura anotsanangurwa mudura rechikwereti dhatabhesi. Iko kune chiyeuchidzo chezuva uye huwandu hwekubhadhara, kuziviswa kwechirango. Kutumira tsamba kwakarongerwa kushambadzira zvinangwa zvekusimudzira masevhisi uye nenzira dzakasiyana, zvichienderana nechikonzero chakasarudzwa chekutsigira kubata - mumwe nemumwe, muhuwandu hwakawanda, uye kuboka rakanangwa.
Zvinyorwa zvinogadzirwa otomatiki zvinosanganisira chero rudzi rwekuzivisa, kusanganisira zvemari, accounting, nhamba uye zvinotenderwa, chibvumirano chakajairwa, uye ma invoice. Paunenge uchiita kunyorera chikwereti, chirongwa ichi chinogadzira chibvumirano chechikwereti muMS Word ine ruzivo rwevatengi rwunosanganisirwa mariri uye nemamiriro anotenderwa echikwereti. Kana uchinyorera chikwereti, chirongwa ichi chinobva chaverenga muripo uchifunga chiyero chemubereko, chinoshandura huwandu hwayo kana mwero wekutsinhana uchichinja, kana chikwereti chikaburitswa machiri. Iyo otomatiki system inochengeta manhamba pazviratidzo zvese, kusanganisira huwandu hwezvakatenderwa uye zvakarambidzwa zvikumbiro, izvo zvinobvumidza kuronga kunoshanda. Zvichienderana nehuwandu hwekuverenga, kuzivisa zvemukati kuri kuumbwa pamwe nekuwongorora uye kuongororwa kwemhando dzese dzebasa, izvo zvinoita kuti zvikwanise kuvandudza hunhu hwavo uye nekuona kukura kunobatsira.
Kuongororwa kwezviratidzo zvazvino kunotibvumidza kuongorora zviitiko zvevatengi pane imwe nguva, kudiwa kwechikwereti, kushanda kwevashandi, kutsauka kubva panguva yekubhadhara, uye chikwereti chikuru. Ongororo yekuongorora inoratidzwa nenzira iri nyore uye inoonekwa - matafura, madhayagiramu, uye magirafu anoona kukosha kwechiratidzo chimwe nechimwe mukuita purofiti. Kuongororwa kwemari zviwanikwa kunokutendera kuti uongorore mhando yeiyo chikwereti portfolio, kuona kukodzera kwemitengo yemumwe munhu, kuona isingabatsiri mari yezvirongwa uye huwandu hwezvikwereti.
Kuiswa kwechirongwa kunoitwa nevashandi veUSU Software. Izvo chete zvinodiwa zvemadhijitari madhizaini iWindows operating system. Mushure mekumisikidzwa, pane kuratidzwa kweanogona echikumbiro ekuverengesa ezvikwereti zvikwereti.